सरकारलाई सूचना दिनुहोस्, १० लाखसम्म लिनुहोस् ! - अभियान खबर
सरकारलाई सूचना दिनुहोस्, १० लाखसम्म लिनुहोस् !
सरकारलाई सूचना (सुराकी) दिए १० लाख सम्म पुरस्कार पाइने कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? हो, सरकारलाई सूचना दिएकै भरमा तपाईंले १० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ । कुनैपनि वस्तु चोरी पैठारी भएको छ भने सोको सूचना सरकारलाई दिनुहोस् र १० लाखसम्म पाउनुहोस् । यस्ता खालका सूचनामा सरकारले १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, सो रकम सुराकीको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । सबै खालको सुराकीमा १० लाख पाइँदैन ।
भन्सार विभागले सुराकीलाई पुरस्कार दिँदै आएको छ । तर, अब त यस्तो पुरस्कारको राशीसमेत बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पुरस्कारको राशीसमेत बढाइएको छ । भन्सार नियमावली २०६४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
भन्सार नियमावलीलाई संशोधन गरेर पुरस्कारको राशी बढाइएको हो । भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भनसार नियमावलीको संशोधनले सुराकी दिनेको पुरस्कारको रकम बढाइएको बताउँछन् ।
सुराकीको प्रकृति अुनसार सुराकी दिएबाट पक्राउ भएको माल वस्तु लिलाम विक्री गरिसकेपछि विक्री पश्चात प्राप्त भएको रकमको निश्चित प्रतिशत सुराकीले पाउँछ । भन्सार नियमावली २०६४ को १ मा पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
कसैले कुनै वस्तु चोरी पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिन्छ भने उसले वस्तु लिलाम बिक्रिबाट आएको १५ प्रतिशतसम्म रकम पाउँछ । अहिले यो रकम ५ प्रतिशत बढाइएको छ । यस अघि १० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था थियो ।
यस्तै चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको मालवस्तुसहित मानिस पक्रेर पेश गर्नेले दिने पुरस्कार १० प्रतिशले बढेर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि २० प्रतिशत पुरस्कार दिइन्थ्यो ।
चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको मालवस्तु मात्र पक्रेर पेश गरेमा १० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिइन्थ्यो भने अब २० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यो भन्सार नियमावली २०६४ को १० औ संशोधनले व्यवस्था गरेको हो । २०७६ असार २३ गते यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
तर, बहुमूल्य धातु ( सुन, चाँदी, जवाहरत) मुद्दामा सुराकी दिने वा मालवस्तु सहित मानिस पक्राउ गरेर पेश गर्नेलाई वस्तु लिलाम विक्रीबाट प्राप्त भएको १० प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँ मध्ये जुन घटी हुन्छ सोही रकम पुरस्कार दिइनेछ । यो बुँदामा भने परिवर्तन भएको छैन ।
भन्सार विभागका प्रवक्ता घिमिरे हालसम्म कतिले सुराकी दिएर यस्तो पुरस्कार पाए भन्ने यकिन तथ्यांक भनसार विभागसँग नहरको बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा सुराकी जाने र उनीहरुले नै सो पक्राउ परेको मालवस्तुबाट सुराकीको पुरस्कार भर्पाइ गर्ने भएकाले कसैसँग यसको तथ्याङ्क छैन ।
यसरी दिने सुराकी
नियमावलीको नियम ४८ मा सुराकी प्रतिवेदन वा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । मालवस्तु पक्राउ गर्नु अगावै सुराकी सम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना पठाउनु पर्नेछ । पक्राउ परेपछि प्राप्त भएको सूचनालाई मान्यता दिइने छैन । सुराकी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा महानिर्देशकलाई दिनुपर्नेछ । यसरी महानिर्देशकलाई प्राप्त भएको सूचना तत्काल महानिर्देशकले सम्बन्धित भनसार कार्यालयको प्रमुखलाई मौखिक वा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । दुई वा दुइ भन्दा बढी ठाउँबाट सूचना आएको छ भने पहिलोले मान्यता पाउनेछ ।
सुराकी दिँदा खुलाउनुपर्ने विवरण
हवाइजहाजबाट हुने चोरी निकासी तथा चोरी पैठारीको सुराकी दिँदा हवाइजहाजको उडान नम्बर चोरी निकासी गर्ने व्यक्तिको सम्भव भएसम्म नाम वा राहदानी नम्बर, हुलिाय चोरी लगेको मालवस्तुको नाम र लुकाइ
छिपाइ ल्याउने वा लैजाने तरिकासमेत खुलाउनु पर्नेछ ।
यदि स्थलमार्गबाट चोरी निकासी भएको छ भने सो वस्तुको नाम, चोरी पैठारी हुन लागेको स्थान, सवारी साधनको किसिम, नम्बर, लुकाइ छिपाई ल्याउने लैजाने तरिका र सम्भव भए सो व्यक्तिको नाम र हुलिया खुलाउनु पर्नेछ ।
बिमा गराउने अभिकर्ताहरुको लागि अनुरोध ।। प्रस्तावक र बिमितको आर्थिक अवस्था बुझेर मात्र बिमा गरौं र गराउ।।
Posted on November 2, 2019 November 2, 2019 Author abhiyaan
बिमाबापतको एक करोड रुपैयाँ हत्याउन श्रीमतीको योजनाबद्ध हत्या गर्दा श्रीमान् जेल गए, दुई छोराछोरीको बिचल्ली भयो (पोखरा) — श्रीमान्‌को मोबाइल पसल, श्रीमतीको कुखुरा फार्म । एक छोरी र एक छोरा । पोखरामा तीनतले घर । जीवन हाँसीखुसी चलिरहेको थियो, बीचमा बिमा पस्यो । भविष्य सुरक्षित हुने आशामा जीवन बिमा गरेकी पोखरा–१५ की लक्ष्मी नेपाली (परियार) […]
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाव
Posted on July 10, 2018 Author abhiyaan
काठमाडौं –अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि राय दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार […]
गोली चलाएर लोकतन्त्रको रक्षा हुने हो प्रधानमन्त्रीज्यू? : कांग्रेस
Posted on July 9, 2019 July 9, 2019 Author abhiyaan
नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको विषयमा गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। ‘लोकतन्त्रको रक्षा गोली चलाएर नै हुने हो प्रधानमन्त्रीज्यू?,’ शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट प्रश्न सोधेका छन्, ‘गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत कि सरकारकै […]
ककनीमा बालुवाको पोखरीमा डुबेर एक स्कूले बालकासहित दुइकोे मृत्यु
टोखा छहरे बाटोमा सरकार देखिएन ,निमार्णका लागि जुट्यो नेपालि काङ्ग्रेस